Fraport dia miomana amin'ny 2021 AGM: manana izany ny Lehiben'ny Birao Mpanatanteraka
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Fraport dia miomana amin'ny 2021 AGM: manana izany ny Lehiben'ny Birao Mpanatanteraka
Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Filohan'ny Birao Mpanatanteraka Fraport
Androany, Fraport AG dia namoaka mialoha ny kabary izay hatolotry ny filohan'ny birao mpanatanteraka (CEO) Dr. Stefan Schulte amin'ny fivorian'ny General Tahiry 2021 an'ny orinasa.
Ny kabary mialoha dia ny fanomezana ny tompon'andraikitra vintana handrafetana fanontaniana alohan'ny tena fivoriana sy handefasana azy ireo amin'ny Internet.
Amin'ity taona ity, ny Fivoriana Fanao Isan-taona 2021 dia hatao amin'ny endrika virtoaly amin'ny 1 Jona 2021 ihany.
Ny hetsika AGM dia halefa mivantana amin'ny alemà ihany amin'ny tranokala Fraport.
Manome ny tompon-tany fotoana ahafahana mandinika ny kabary alohan'ny handefasana ny fanontaniany momba ny lohahevitra. Ny fanontaniana dia tsy maintsy apetraka amin'ny Internet amin'ny 30 Mey (hatramin'ny 24:00). Noho ny areti-mandringana COVID-19 dia hatao amin'ny endrika virtoaly ihany ny AGM an'i Fraport amin'ny 1 Jona 2021 amin'ny 10:00 maraina (CEST).
Amin'ny andron'ny AGM, ny hetsika iray manontolo dia ho hita amin'ny alàlan'ny mivantana (alemà ihany) amin'ity tranonkala ity. Ny teny tononina amin'ny andron'ny AGM dia alahatra amin'ny endrika voasoratra. ny Fraport AGM Ny vavahadin-tserasera dia azo ampiharina amin'ny alàlan'ity rohy ity ihany, ahafahan'ny shareholder sy ny mpisolo toerana azy ireo hisoratra anarana sy hampiasa ny zony amin'ny fifidianana.
Atolotra eto ny lahateny an-tserasera an-tsoratra mialoha:
Ry tompon-tany malala, tompokolahy sy tompokovavy!
Miarahaba anao fatratra amin'ny Fihaonambe Fanao isan-taona an'ny Fraport AG. Toy ny tamin'ny taona lasa, mandray anao izahay avy amin'ny efitrano fihaonambe any amin'ny foibenay any Frankfurt. Ireo mpiara-miasa amiko ao amin'ny Birao Mpanatanteraka - Anke Giesen, Michael Müller, Dr. Pierre Dominique Prümm ary Dr. Matthias Zieschang - dia hanaraka ny Fivoriana Fanao Isan-taona amin'ny Internet, toy ireo mpikambana hafa ao amin'ny Birao Mpanara-maso ihany koa.
Herintaona lasa izay, maro no nanantena fa ho afaka hihaona mivantana indray amin'ity taona ity amin'ny toerana fanaontsika mahazatra any Frankrast Jahrhunderthalle. Saingy hiaraka amintsika ela kokoa ny coronavirus ary mbola misy fiatraikany amin'ny fiainantsika andavanandro.